Todobaad Murugo Ah Ka dib Xuska iyo Xusuusta Inankaygii Iyo Arrimihii Aan Ka Arkay, By. Axmed Arwo - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Todobaad Murugo Ah Ka dib Xuska iyo Xusuusta Inankaygii Iyo Arrimihii Aan Ka Arkay, By. Axmed Arwo
Waxuu ahaa nin dadiisa ka weyn, ka waayo aragsan, ka fikir dheer, aan waqti kaga lumin waxaan if iyo aakhiro waxyeelo mooyee aan waxtar lahayn. Nin ag gaaban oon aqoon xan, xaasid, xumayn. Nin afkiisa iyo gacantiisu waxtar mooyee ayna waxyeelo aqoon. Nin salaanta islaamka aan dhaafin, cidda uu la macaamilaayo gaal iyo muslinba ula dhaqma ixtiraam iyo wanaag. Deeqsi sadaqada hoos u bixiya ehelna sooryeeya, saaxiibna taakuliya, caruur iyo ciroolaba nin ka qosliya,kaftan aan turxaan lahayn iyo waano ku maaweeliya dhalinta.
Waxuu ahaa nin hamo dheer oo rabay inuu dhiso boqortooyo ganacsi. Waxuu u baahnaa taageeradeyda oon ka baaqday. Waxaan Isla garanaya Ramadaan ka hor inaan hawl galno oo hamigiisa aan gacan qabto iyo Hargeysa oon ka bilowno. Waa mid ay adagtay inaan xaqiijiyo kol haddaan waayey xamaasaddii iyo awoodi Maxamed.
Soomalidu waxay tidhi Alle ma naxo ee wuu naxariistaa. Waa dhab. Maxamed wax yar ayuu xanuunsaday. Intabana samir, iyo adkeysi uu nooga naxay werwer ayuu ku qariyey. Waxuu ka dhigay arrin sahlan, isagoon afkiisa “waan wacanay iyo Alxamdulilaa” maahee aan wax kale laga maqal. Waxaan qoomameeya waa maqnaansha anigoo wax mashquul ah hayn, anigoo awood caafimaad iyo mid maadiba haya, Alle iima qorin inaan nolol ku gaadho. Talaabada qoran, waxaan gaadhay isagoo mootan maalin.
Waxaanan iloobi kareyna sida uu sida ubadka noola macaamili jiray. Kolkuu guriga soo galo, waxuu sida cuntu, waxuu sida macmacaan, waxuu sii qaada dhar u baahan kaawiyad, isagoo ka qarinaya hooyadi. Waxa noo soo noqda dharkii oo bcaysan sidii ooy yihiin dhar cusub. Marna ma aha wax aanu u dirnay, waliba waanu ku canaantay wax badan. Dhig uma dhigo oo ma jecela in aniga iyo hooyadii gacan u qaadno hawl nooc kastaba ha ahaatee. Guriga meelaha u baahan dhismaha, gidaar amba loox mar uu arkay garanmeysid waa isagoo garaacaaya, toosinaaya, cid ugu yeedhaaya haddii loo baahdo.
Waxaan xusuustaa sida wiilkiisa yar uu noogu xidhay, waa isagoo sida, oo noo keena, kuna afbartay awoowo iyo ayeeyo. Allow nooga dhig mid na xusuusiya wanaagii Maxamed.
Waxaan balan leyga sameeyey inaan Maxamed ku siyaarto qolka maydka. Waxa la soo dhigay qol loogu talo galay in ehelku ku siyaarto, oo aad u nadiif ah, u gaar ah oo dugsoon. Waan is dul tagay oon aad indhaha u dul dhigay wiilkaan jeclaa oo mayd ah. Madaxiisaan gacanta saaray deedna quraan iyo duco ayaan bilaabay. Dhegta midig ayaan kaga eedaamay. Waligay mayd ma arag cidini waxba iima sheegin. Waa ani iyo dareenkey. Gacantaan wajiga mariyey, gadh qurxoon oo isku buuxa oonan waligay ku arag yaan u salaaxay, dibnaha iyo indhaha yaan qunyar gacanta mariyey. Deedna jidhkiisa kale oo asturan ayaan quraan dacal ilaa dacal ku akhriyey.
Waxaan dareemey in Maxamed I maqlayo oo balan iyo hadal ayaan dhegta u saaray. Waan farxay oo wajiga Maxamed waa mid nuuraaya, waa mid u heelan inuu u boqoolo dhinaca Alle. Waa waji ehlu janno. Waxa qolka igu weheliya Laba walaaladay ah iyo seddex wiil oon abti u ahay iyo wiil aan ilmaadeer nahay.Dhammaan duco iyo quraan akhris ayey wadaan, ilamaduna labada dhaban ayey ka da’aysaa.